Taliye la xiray kadib markii uu diiday in la dilo Madaxweynayaal hore | KEYDMEDIA ONLINE
Taliye la xiray kadib markii uu diiday in la dilo Madaxweynayaal hore
Dowladda uu waqtigeedii dhamaatay ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa waxaa maalintii labaad si sharci raddo ah ugu xiran Taliyaha ciidamada gaarka ah ee Waran oo NISA ka tirsan Maxamed Xasan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye Maxamed Xasan ayaa la xiray kadib markii uu ka horyimid awaamiir dastuurka khilaafsan oo ka soo baxay taliyaha NISA Fahad Yaasiin, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Maxamed Xasan, ayaa lagu amray inuu habeenkii Jimcadu ay soo galeysay weeraro Huteel Maa’iddo oo ay daganaayeen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hayeeshee wuu ka dhaga adeegay amarkaas sharciga baal-marsan.
Farmaajo iyo Fahad oo qorshahoodu ahaa in la qaarijiyo Madaxweynayaashii hore ayaa kadib diidmada Maxamed Xasan, waxa ay howl-galkii Huteel Maa’iddo u wakiisheen afar Taliye oo Farmaajo ku heyb ah, kuwaas oo ku guuldarreystay in ay u jeedkii loo diray gaaraan, maadaama ciidamaddii Madaxweynayaashu iska caabiyeen.
Fahad iyo Farmaaajo ayaa amaray in xabsiga la dhigo Taliye Maxamed Xasan, kaas oo lagu eedeeyay inuu diiday u adeegista Rajiimka waqtigiisu dhamaaday maadaamada uu diiday inuu dhibaateeyo Xurmadlayaal dalkaan u shaqeeyay.
Kali-taliska waqtigu ka dhamaaday wuxuu sidoo kale is ku dayay inuu xirxiro taliyaal kale oo ka tirsan NISA, hayeeshee uma suura galin, sidoo kale waxa ay qorsheeyeen in weeraran Huteel Jasiira oo uu dagan yahay Taliyihii hore ee guutada 16-aad ee kumandooska DANAB, Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik Maalin oo hadda ka mid ah garabka Mucaaradka.